ငါ့အဘို့ဤစာအုပ်ငါသည်ငါ့ dissertation အပေါ်အလုပ်လုပ်ကိုင်သောအခါ 2005 ခုနှစ်အတွက်စတင်ခဲ့သည်။ ငါအခန်း4မှာသင်တို့ရှိသမျှသည်အကြောင်းကိုပြောပြလိမ့်မယ်ပေးသောအွန်လိုင်းမှစမ်းသပ်မှု, ပြေးခဲ့ပေမယ့်ယခုငါသည်သင်တို့ကိုမဆိုပညာရေးဆိုင်ရာစာရွက်ထဲမှာမကြောင်းအရာတစ်ခုခုပြောဖို့သွားတာပါ။ ထိုအကအခြေခံကျကျငါသုတေသနလုပ်ငန်းကိုစဉ်းစားပုံကိုပြောင်းလဲသွားကြောင်းအရာတစ်ခုခုရဲ့။ ငါ Web-server ကို check လုပ်ထားသည့်အခါတစ်ဦးကနံနက်, ငါသည်ဘရာဇီးမှနေ့ချင်းညချင်း 100 ခန့်ကလူကိုငါ့စမ်းသပ်မှုပါဝင်ခဲ့ဘူးသောရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီအတှေ့အကွုံအကြှနျုပျအပေါ်တစ်ဦးလေးနက်သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကကျွန်မအစဉ်အလာဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်အပြေးသူမိတ်ဆွေတွေရှိခဲ့ပါတယ်, ငါသူတို့စုဆောင်းကြီးကြပ်ကွပ်ကဲလျက်, သူတို့စမ်းသပ်ချက်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့လူဆပ်ဖို့အလုပ်လုပ်ရတယ်ဘယ်လောက်ခဲယဉ်းသိလျှင်, သူတို့တစ်တွေတစ်ခုတည်းသောနေ့၌လူ 10 ကို run နိုင်လျှင်, ထိုကောင်းမွန်သောတိုးတက်မှုခဲ့သည်။ ငါအိပ်ပျော်စဉ်သို့သော်, ငါ့အွန်လိုင်းစမ်းသပ်မှုနှင့်အတူလူ 100 ပါဝင်ခဲ့။ သငျသညျအိပျပျြောနေသင့်ရဲ့သုတေသနပြုချက်အကျင့်ကိုကျင့်စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်လွန်းကောင်းသောအသံ, ဒါပေမယ့်မဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်နည်းပညာအတွက်အပြောင်းအလဲများယခုကြှနျုပျတို့နည်းလမ်းသစ်တွေအတွက်လူမှုရေးဒေတာစုဆောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုငျသောဒစ်ဂျစ်တယ်အသက်အရွယ်-ယုတ်ဖို့ Analog စအသက်အရွယ်ကနေအကူးအပြောင်း။ ဤစာအုပ်သည်ဤနည်းလမ်းသစ်တွေအတွက်လူမှုရေးဆိုင်ရာသုတေသနလုပ်နေအကြောင်းပါ။
ဤစာအုပ်နှစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအဘို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာပိုပြီးဒေတာသိပ္ပံပညာကျင့်ချင်ကြောင်းလူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေအဘို့ဖြစ်၏, ထိုထက်ပိုသောလူမှုရေးသိပ္ပံပညာလုပ်လိုတဲ့ data သိပ္ပံပညာရှင်များအဘို့ဖြစ်၏။ ငါသည်ဤလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှစ်ခုလုံးအတွက်အချိန်ဖြုန်း, ဤစာအုပ် quirks နှင့်ဖြစ်စေ၏ဗန်းစကားကိုရှောင်တဲ့လမ်းအတွက်အတူတူသူတို့၏အတွေးအခေါ်များကိုရောက်စေဖို့, ငါ့ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်သည်သောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းပေးသောကြောင့်ဤစာအုပ်ကိုဖွင့်ကျောင်းသားနှင့်ပါမောက္ခများအဘို့မဟုတ်ဟုမပါဘဲသွားသင့်ပါသည်။ ငါ (အမေရိကန်သန်းခေါင်စာရင်းဗျူရိုမှာ) အစိုးရထဲမှာတချို့အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် (Microsoft မှသုတေသနမှာ), ငါတက္ကသိုလ်တွေပြင်ပဖြစ်ပျက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာသုတေသနတွေအများကြီးရှိကွောငျးကိုသိပါတယ်။ သငျသညျသငျသညျလူမှုရေးသုတေသနများအဖြစ်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒါ, သို့ဖြစ်လျှင်ဤစာအုပ်, သင်တို့အဘို့အသငျသညျအလုပ်မလုပ်ဘယ်မှာနေပါစေဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သင်လက်ရှိကိုသုံးနည်းစနစ်ဘယ်လို။
ကျနော်တို့ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်လူမှုရေးသုတေသန၏အစောပိုင်းကာလ၌ရှိနေတုန်းပဲဖြစ်ကြောင်း, ငါကိုငါ့နိဒါနျးပိုငျးတှငျဒီနေရာမှာသူတို့ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အဘို့အကအများဆုံးသဘာဝကျပါတယ်ဒါကြောင့်အခြေခံအကျဆုံးနှင့်ဒါဘုံဖြစ်ကြောင်းအချို့သောနားလည်မှုလွဲမှားခြင်းမြင်ကြပါတယ်။ ဒေတာသိပ္ပံပညာရှင်များမှ, ငါနှစ်ဦးဘုံနားလည်မှုလွဲမှားခြင်းမြင်ကြပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးကပိုဒေတာအလိုအလျှောက်ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်ကြောင်းစဉ်းစားသည်။ သို့သော်, ငါ့အတှေ့အကွုံခဲ့မရှိသေးပါဘူးကြောင်းလူမှုရေးသုတေသနအတွက်။ တကယ်တော့, တူညီတဲ့ data တွေကိုပိုပြီးအားဆန့်ကျင်အဖြစ်အချက်အလက်များ၏လူမှုရေးသုတေသနအသစ်အမျိုးအစားများ, အဘို့, အများဆုံးအထောက်အကူဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ ငါဒေတာသိပ္ပံပညာရှင်များမှမြင်ဖူးတဲ့သောဒုတိယနားလည်မှုလွဲလူမှုရေးသိပ္ပံပညာဘုံသဘောရစ်ပတ်ဖန်စီ-talk မှပဲတစည်းကြောင်းစဉ်းစားသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်-ပိုပြီးတိတိကျကျတစ်လူမှုဗေဒပညာရှင်-ငါနှင့်အတူသဘောမတူဘူးသကဲ့သို့, ငါလူမှုရေးသိပ္ပံပညာကမ်းလှမ်းမှုကိုမှအများကြီးရှိကြောင်းထင်ပါတယ်။ စမတ်ကလူတစ်ဦးအချိန်ကြာမြင့်စွာသောလူ့အပြုအမူကိုနားလည်ရန်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြနှင့်ဤအားထုတ်မှုကနေစုဆောင်းသောဉာဏ်ပညာကိုလစျြလြူရှုဖို့ပညာမဲ့ပုံရသည်။ ငါမြော်လင့်ဤစာအုပ်ကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူကြောင်းတစ်လမ်း၌သငျပညာ၏အချို့သောဆက်ကပ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေကနေငါသည်လည်းနှစ်ခုဘုံနားလည်မှုလွဲမှားခြင်းမြင်ကြပါတယ်။ ရှေးဦးစွာငါလူတချို့ကိုရေးသား-off လူမှုရေးသုတေသနတစ်ခုလုံးကိုစိတ်ကူးအနည်းငယ်မကောင်းတဲ့စာတမ်းများအပေါ်အခြေခံပြီးဒစ်ဂျစ်တယ်အသက်အရွယ်၏ tools တွေကိုသုံးပြီးမြင်ကြပါတယ်။ သင်ဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခြင်းနေတယ်ဆိုရင်, သင်ဖြစ်နိုင်ပြီးသား banal သို့မဟုတ်မှား (သို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး) ဖြစ်ကြောင်းနည်းလမ်းတွေထဲမှာဆိုရှယ်မီဒီယာဒေတာတစ်ခုကိုစာတမ်းများတစည်းဖတ်ကြပါပြီ။ ငါအရမ်းရှိသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အားလုံးဒီဂျစ်တယ်ခေတ်လူမှုရေးသုတေသနလုပ်ငန်းမကောင်းတဲ့ကြောင်းဤဥပမာကနေကောက်ချက်ချရန်အလေးအနက်အမှားပါလိမ့်မည်။ တကယ်တော့သင်ဖြစ်နိုင်လည်း banal သို့မဟုတ်မှားဖြစ်ကြောင်းနညျးလမျးစစ်တမ်းဒေတာအသုံးပြုစာတမ်းများတစည်းဖတ်ပါတယ်, သင်မူကားရေးမှ-ပယ်ကြပါဘူးအားလုံးသုတေသနလုပ်ငန်းစစ်တမ်းများကိုသုံးနိုင်သည်။ သငျသညျစစ်တမ်းဒေတာနှင့်အတူပြုသောအမှုအကြီးအသုတေသနလုပ်ငန်းရှိကွောငျးသိသောကြောင့်ကြောင်းဖွင့်, ဤစာအုပ်၌ငါသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသက်ကိရိယာနှင့်အတူပြုသောအမှုအကြီးအသုတေသနလုပ်ငန်းလည်းရှိကွောငျးကိုသင်ပြသွားတာပါ။
သုတေသီများကိုပထမဦးဆုံးမေးခွန်းကိုဖြေဖို့လေ့ကျင့်နေကြသည်သော်လည်းဤစာအုပ်သည်ငါဒုတိယမေးခွန်းကပိုအရေးကြီးပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါကဒီဂျစ်တယ်ခေတ်သုတေသန၏တိုးတက်မှုနှုန်းမယုံနိုင်လောက်အောင်လျင်မြန်စွာဖြစ်ပါသည်, ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်လူမှုရေးဆိုင်ရာသုတေသနသေးအကြီးအကျယ်, ပါရာဒိုင်းပြောင်းလဲပညာတတ်ပံ့ပိုးမှုများကိုထုတ်လုပ်မမူသော်လည်း, ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာငါ့အဖို့ဒါကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဒီဂျစ်တယ်ခေတ်သုတေသနလုပ်ငန်းကိုအကြောင်း, လက်ရှိအဆင့်အတန်းထက်ပိုပြီးပြောင်းလဲမှု၏ဤအမှုနှုန်းဖြစ်ပါသည်။
နောက်ဆုံးအပိုဒ်အနာဂတျတှငျအခြို့သောမသတ်မှတ်ထားသောအချိန်မှာသငျသညျအလားအလာစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုပူဇော်ပုံသော်လည်းဤစာအုပ်၌ငါ့ရည်မှန်းချက်သုတေသန၏မည်သည့်အထူးသဖြင့်အမျိုးအစားပေါ်တွင်သင်ရောင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ငါက Twitter, Facebook, Google, Microsoft, Apple ကသို့မဟုတ်အခြားနည်းပညာကုမ္ပဏီထဲမှာမပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကိုယ်ပိုင်ရှယ်ယာ (အပြည့်အဝထုတ်ဖော်၏ဘို့အလိုငှါငါမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီသို့မဟုတ် Microsoft က, Google နှင့် Facebook ကနေသုတေသနလုပ်ငန်းရန်ပုံငွေလက်ခံရရှိ, ပေမယ့်) လုပ်ပါ။ သင်ပြီးသားလုပ်နေကြကြောင်းသုတေသနနှင့်အတူပျော်ခဲ့လျှင်ကြီး, သင်လုပ်နေတာဘာလုပ်နေစောင့်ရှောက်လော့။ သငျသညျဒစ်ဂျစ်တယ်အသက်အရွယ်အသစ်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုတတ်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်တဲ့သဘောရှိပါကသို့သော်, ထို့နောက်ငါသည်သင်တို့ကိုသူတို့အားဖြစ်နိုင်ခြေကိုပြသချင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်စာအုပ်တစ်လျှောက်လုံးကိုငါ့ရည်မှန်းချက်ကွာငါကိုအခြားသူများသို့ရောကျဖူးကြောင်းအနည်းငယ်ထောငျခြောကျထဲကနေသင်လမ်းပြနေစဉ်, ဖြစ်နိုင်သမျှသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသစ်ပစ္စည်းပစ္စယအကြောင်းသင့်ပြောပြတစ်ဦးယုံကြည်ရလောက်ဇာတ်ကြောင်းပြောဆက်လက်တည်ရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်ဤသည်သင်၏သုတေသနလုပ်ငန်းတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီသင်ပိုကောင်းအခြားသူများရဲ့သုတေသနအကဲဖြတ်ကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
သငျသညျပြီးသားသတိပြုမိကြလိမ့်မယ်အဖြစ်, ဤစာစောင်၏လသေံအချို့သောအခြားပညာရပ်ဆိုင်ရာစာအုပ်များမှတစ်နည်းနည်းကွဲပြားခြားနားသည်။ ဒါကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပါပဲ။ ဤစာအုပ်ငါလူမှုဗေဒဦးစီးဌာနအတွက် Princeton မှာသွန်သင်ကြပြီတဲ့ဘွဲ့ရနှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှထွက်ပေါ်လာ, ငါကြောင့်ဆွေးနွေးပွဲကနေစွမ်းအင်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအချို့ကိုဖမ်းရန်ဤစာအုပ်ချင်ပါတယ်။ , အထောကျအကူအကောင်းမြင်နှင့်အနာဂတ်-oriented: အထူးသဖြင့်, ငါသညျဤစာအုပ်သုံးဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်ဖို့ချင်တယ်။
အထောကျအကူ: ငါ့အရည်မှန်းချက်သင်တို့အဘို့အထောကျအကူပွုသောစာအုပ်ရေးသားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကွောငျ့, ငါဖွင့်ခြင်းနှင့်အလွတ်သဘောစတိုင်ရေးသားဖို့သွားတယ်။ ငါဖျောပွခငျြသောအရေးအပါဆုံးအရာကလူမှုရေးသုတေသနဆိုင်ရာစဉ်းစားနေတဲ့အချို့သောလမ်းသောကွောငျ့ကြောင့်ပါပဲ။ နှင့်အညီ, သှနျသငျမှငါ့အတွေ့အကြုံကစဉ်းစားတွေးခေါ်၏ဤအလမ်းဖျောပွဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအလွတ်သဘောနှင့်ဥပမာအများကြီးနဲ့အတူကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
အကောင်းမြင်: ဤစာအုပ်ထိတွေဆက်ဆံမှုပြုလုပ်ပါက-လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ဒေတာကိုအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့စတိုင်များသိပ္ပံပညာရှင်များ-ရှိသည်သောအဆိုပါလူ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခု။ ဒေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေယေဘုယျအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်; သူတို့ခံရသောထက်ဝက်အပြည့်အဝအဖြစ်ဖန်ကြည့်ဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ လူမှုသိပ္ပံပညာရှင်တွေ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုပြီးအရေးပါတဲ့ပါ၏ သူတို့အချည်းနှီးသောတစ်ဝက်အဖြစ်ဖန်ကြည့်ဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ ဤစာအုပ်၌ငါသည်ငါ၏အလေ့ကျင့်ရေးလူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ပင်သော်လည်း, ဒေတာသိပ္ပံပညာရှင်များ၏အကောင်းမြင်သေံချမှတ်သွားတာပါ။ ငါဥပမာတင်ပြရသောအခါဒီတော့ငါသည်ဤဥပမာအကြောင်းကိုချစ်သင်သည်အဘယ်သို့ပြောဖို့သွားတာပါ။ ထိုအခါသောအခါ, ငါနှင့်အတူပြဿနာများကိုထောက်ပြကြဘူးဥပမာ-နှင့်မျှမတို့သုတေသနလုပ်ငန်းစုံလင်သောပာုတ်တစ်လမ်းတွင်ဤပြဿနာများကိုထောက်ပြဖို့ကြိုးစားသွားအပြုသဘောဆောင်ပြီးအကောင်းမြင်သောကွောငျ့ငါသည်ဤပြုလိမ့်မည်။ ငါဝေဖန်ဖြစ်ခြင်း၏အကျိုးအတွက်အရေးပါဖြစ်မသွားဘူး။ ငါသည်သင်တို့ကိုပိုမိုလှပသောသုတေသနလုပ်ငန်းဖန်တီးကူညီနိုင်အောင်အရေးကြီးတဲ့ဖြစ်သွားတာပါ။
အနာဂတ်-oriented: ငါဒီစာအုပျသငျသညျယနေ့တည်ရှိနေသောဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်တွေနဲ့အနာဂတျမှာကဖန်တီးလိမ့်မည်ဟုဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးလူမှုရေးသုတသေနပွုကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ငါ 2003 ခုနှစ်ကသုတေသနဒီလိုမျိုးလုပ်နေတာစတင်ခဲ့ပြီး, ပြီးတော့ကတည်းကငါအပြောင်းအလဲများတွေအများကြီးကိုမြင်ရပါတယ်။ ငါဘွဲ့လွန်ကျောင်းတွင်ရှိစဉ်အခါကလူလူမှုရေးသုတေသနအတွက် MySpace အသုံးပြုခြင်းအကြောင်းကအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြကြောင်းသတိရပါ။ ငါထို့နောက်ဟုခေါ်တွင်သောအရာကိုအပေါ်ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားဆုံးမသွန်သင်သောအခါ, "web-based လူမှုရေးသုတေသန," လူထိုကဲ့သို့သော SecondLife အဖြစ်ကို virtual လောကအကြောင်းကိုအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြ။ ငါအနာဂတ်၌ယနေ့လူအကြောင်းပြောနေတာဘာတာရီစရာများနှင့်ခေတ်မမီတော့ထင်ရလိမ့်မည်ဟုသေချာပါတယ်။ ဒီလျင်မြန်သောပြောင်းလဲမှု၏မျက်နှာ၌သက်ဆိုင်ရာတည်းခိုဖို့လှည့်ကွက် abstraction ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီကို Twitter API ကိုအသုံးပွုဖို့အတိအကျသင်မည်သို့သွန်သင်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်မသွားမခြင်း, အစား, ကသငျသညျဒစ်ဂျစ်တယ်ခြေရာတွေ (အခန်း 2) မှလေ့လာသင်ယူဖို့ဘယ်လိုသင်ပေးတဲ့စာအုပ်ဖြစ်သွားသည်။ ဒါဟာသင် step-by-step ညွှန်ကြားချက်အမေဇုံစက်မှု Turk အပေါ်စမ်းသပ်ချက်အပြေးအဘို့ပေးတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်မသွားမခြင်း, အစားကဘယ်လိုဒစ်ဂျစ်တယ်အသက်အရွယ်အခြေခံအဆောက်အဦများ (အခန်း 4) အပေါ်အားကိုးကြောင်းစမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်းနှင့်အနက်ကိုဘော်ပြရန်သင့်အားသွန်သင်ပေးသွားသည်။ abstraction များအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်, ငါသည်ဤအချိန်မီခေါင်းစဉ်အပေါ်တစ်ဦး timeless စာအုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ငါသည်ဤအစဉ်အဆက်တစ်လူမှုရေးသုတေသနပညာရှင်ဖြစ်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ထင်, ငါတိသောလမ်းအတွက်ကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖျောပွဖို့ကြိုးစားသွားတာပါ။ သည်ကသစ်ကိုအချက်အလက်များ၏မှော်အင်အားကြီး ပတ်သက်. မရေ Generation ကျော်လွန်. ရွှေ့ဖို့အချိန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာတိကျတဲ့ရရန်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။